ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အာဇာနည်များ ကျဆုံးချိန် ရန်ကုန်တမြို့လုံး ဥသြဆွဲ၊ ကားဟွန်းတီး အလေးပြု (ရုပ်သံ)
အာဇာနည်များ ကျဆုံးချိန် ရန်ကုန်တမြို့လုံး ဥသြဆွဲ၊ ကားဟွန်းတီး အလေးပြု (ရုပ်သံ)
လူအများအပြား လာရောက်ကာ အစီအစဉ်မျိုးစုံဖြင့် ဂါရ၀ပြုခဲ့ကြ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:00 PM
ပြည်သူတွေ လေးစားစေချင်ရင် ပြည်သူတွေ အတွက်
အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးးစွန်. မှဖြစ်မယ် .....
If Than Shwe and family die, the whole country will doahappy celebration? You can imagine how kind of such person who did govern our country. No level, no standard.